Huon Pine Facts - Linii
FLAT RATE ပို့ဆောင်ခြင်း။ $5 သြစတြေးလျ $22 ကမ္ဘာအနှံ့
Huon ထင်းရူးသစ်သားများက၎င်း၏ထူးခြားသောအနံ့ပေးသည်တဲ့သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းပါဝင်ပါသည်, ဓါတ်များနှင့်တွန်းလှန်အရည်အသွေးတွေ. Huon ထင်းရူးသွင်းတွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်, silverfish, ပိုးနှင့်လှေး. ဒါဟာသူတို့ကိုသတ်ပစ်မည်မဟုတ်, မတစ်ဦးကျခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်မည်. Huon ထင်းရူးကဤပိုးမွှားများ၏အခမဲ့ဧရိယာစောင့်ရှောက်မည်, အသိုက်သူတို့ကိုတား. ကြောက်မက်ဖွယ်အနံ့မရှိသော ရိုးရာပရုတ်လုံးကဲ့သို့ အလားတူလုပ်ဆောင်သည်။.
Linii သေးငယ်သော Mills Huon ထင်းရူးကဘယ်လိုထိရောက်ဖြစ်ပါသည်?
Huon ထင်းရူးသစ်သားများက၎င်း၏ထူးခြားသောအနံ့ပေးသည်တဲ့သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းပါဝင်ပါသည်, ဓါတ်များနှင့်တွန်းလှန်အရည်အသွေးတွေ. Huon ထင်းရူးသွင်းတွန်းလှန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, silverfish, ပိုးနှင့်လှေး. ဒါဟာသူတို့ကိုသတ်ပစ်မည်မဟုတ်, မတစ်ဦးကျခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်မည်. Huon ထင်းရူးကဤပိုးမွှားများ၏အခမဲ့ဧရိယာစောင့်ရှောက်မည်, တူညီသောဧရိယာထဲမှာအသိုက်သူတို့ကိုတား. ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောအနံ့မရှိဘဲရိုးရာပိုးရွဘောလုံးကိုကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်တယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စုပ်အနေနဲ့အလွန်အမင်းထိရောက်သောအနံ့နှင့်မီးဖိုချောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, အိမ်သာခန်း, ကားတစ်စီးစသည်တို့ကို. Huon ထင်းရူးရုံကအဖုံးကိုမအနံ့ကိုစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဝေဟင်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့လတ်ဆတ် Tasmanian မိုးသစ်တောရနံ့ပေး.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူကြသည်. Huon ထင်းရူးအရမ်းစိုစွတ်သောအခါဒါမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစိုထိုင်းဆအစိုဓာတ်အတွက်သုံးပုံတစ်ပုံကရဲ့အလေးချိန်အထိစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်နှင့်လေကြောင်းသဘာဝကျကျကြောင့်အစိုဓာတ်ကိုထုတ်ပယ်ထွက်ခန်းခြောက်ပါလိမ့်မယ်ခန်းခြောက်အဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.
Huon ထင်းရူး Power ကျော်သာယာသောနှင့်မသောသိမ်မွေ့မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိပြီး.
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏အ Huon ထင်းရူးနောက်ဆုံးလိမ့်မည်?
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 18 လများ : တော့ LINII ၏တန်ခိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လအနညျးငရေ ADD
Linii ထု Huon ထင်းရူးလေဟာနယ်ထုပ်ပိုးလာဆန်. သင်၏ထုတ်ကုန်ကလွှ-ကြိတ်ကျန်ကြွင်းရစ်သောနေ့ကကဲ့သို့လတ်ဆတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်.
​​ – ဤအပိတ်ထည်၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သင့်ပိတ်ချောနှင့်အဝတ်အစားဗီရိုထဲမှာ silverfish နှင့်ပိုးရွတွန်းလှန်.
– အနံ့ဖယ်ရှားပစ်ရဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်ထဲသို့သေးငယ်တဲ့အိတ်ထား, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုမရသောအခါသို့မဟုတ်အားကစားအိတ်မှိုရပ်တန့်ရန်.
– သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ကားထဲတွင်အနံ့ကိုစုပ်ယူ. ဥပမာ, သင်သည်သင်၏ကားထဲတွင်ဖိတ်နို့ဒါမှမဟုတ်အလွန်အနံ့အိမ်သာရှိပါက.
တစ်ဦးက 70g အိတ်ထိရောက်စွာတစ်ခုပူးတွဲဧရိယာသေးငယ်တဲ့ဗီရို၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အရွယ်အစားကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးက 285g အိတ်ငယ်များအိတ်သို့တက် ခွဲ. အိမ်ပတ်ပတ်လည်နေရာချသို့မဟုတ်အိမ်သာထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်. ဤသည်အရွယ်အိတ်တစ်ခုသို့သွန်ဖို့လည်းကြီးလှ၏ အသစ်ကခွေးလှေးကွိဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တိရိစ္ဆာန်အိပ်ရာ.
တစ်ဦးက 160gm ကော်ဇောအမြင်ကြည်လင်စေရန်ထိရောက်စွာအလတ်စားအိမ်တွင်းမှသေးငယ်တဲ့အတွက်ကော်ဇော deodorize ပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာကောင်းတစ်ဦးအဟောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ “တုန်လှုပ် N ကို Vac” ဒါပေမဲ့ 100% ဓာတုအခမဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွသဘာဝက.
မူကြမ်းအဆို့တံခါးမြွေတဦးတည်းတဲ့အခန်းကနေအခြားမှလေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးတံခါးများများ၏ရှေ့မှောက်၌နေရာချနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကအစပြင်ပတံခါးများအောက်တွင်ဖှငျ့ပေးရကွာဟချက်မှတဆင့်အိမ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သေးငယ်တဲ့ bug တွေနှင့်သွင်းများအတွက်ထိရောက်သောအတားအဆီးများမှာ.
ငါ Huon ထင်းရူးတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စက်ရုံထင်.
အဆိုပါ Huon ထင်းရူးသြစတြေးလျရဲ့ရှေးအကျဆုံးလူနေမှုသက်ရှိတစ်ခုဖြစ်တယ်. ပျမ်းမျှအပြည့်အဝရင့်ကျက်သောသစ်ပင်၏အပိုလျှံ၌တည်ရှိ၏ 2000 အသက်အနှစ်.
ဤသည်သစ်ပင် Tasmania အစုလိုက်ရှိမယ်လို့သည်နှင့်အဘယ်အရပ်သည်အခြားကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
သစ်တောရေးရာ Tasmania သစ်တောများမှပြီးသားပြိုလဲသစ်သားကိုဖယ်ရှားစေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသော entity များမှာ, မြစ်များ, Tasmania ၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် Protected ဧရိယာအတွင်းမြစ်ဝနှင့်ဝင်ပေါက်. ဤသည်ကိုဆိုလို, ပြီးသားပြိုလဲပြီသာကျွန်းသစ်. Huon ထင်းရူးမတ်တပ်ရပ်၏အဘယ်သူမျှမဖြတ်တောက်ခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်သယံဇာတဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ခွဲတမ်းစနစ်ကအောက်မှာသစ်တော Tasmania စတော့ရှယ်ယာလိပ်ခေါင်းမှတိုက်ရိုက်ကဤသစ်သားဝယ်ယူနိုင်သောလိုင်စင်ရအော်ပရေတာကသာလက်တဆုပ်စာကသူတို့ဖြစ်ကြသည်.
Linii Tasmania Devonfeild Enterprises နှင့်ဗင်းဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်, ဒီနေရာမှာမေးနီးယားမှာရှိတဲ့မသန်စွမ်းစီးပွားရေး Service Providers နှစ်ခုသောသူများမှာ.
သုံးရက်တစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့မဆိုပေးထားသီတင်းပတ်အတွင်း, ကျနော်တို့ခန့်ရှိ. ပြင်ဆင်နေနှင့်စျေးကွက်အဘို့အဆင်သင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ဒြပ်စင်ထုပ်ပိုးနေကြသည်ခုနစ်ကလူ. ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီရေရှည်တည်တံ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်, ကြိုးနှင့်အလုပ်မသွားပေါ်, အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့် paid အလုပ်အကိုင်ပေးကူညီ.
ရက်စွဲကိုဤန်ထမ်းကိုကျော်ထုတ်လုပ်ပါပြီ 4000 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖဲ့.
ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်စရာများကြည့်ဖို့ကဒီမှာဒီ site ပေါ်မှာငါတို့အွန်လိုင်းစတိုးမှာစျေးဝယ်. ကျနော်တို့အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အပ်မည်. တနည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြား stockists ၏တစုံတယောက်သောသူသည်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
သင်အမြဲင-mail ကိုတတ်နိုင်သမျှ linii.tasmania@gmail.com သင်ဖုန်းကိုကျော်အမိန့်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက္ကားစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်.
Linii Tasmania သင့်ရဲ့အမိန့်အဘို့အဆပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ဤအ Pay-Pal ပါဝင်သည်, တိုက်ရိုက်ဘဏ်အပ်ငွေသို့မဟုတ် Credit Card ကို.
ပြန် & ပြန်အမ်း
သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းပြန်လာရန်အဘို့အကျနော်တို့မဆိုအကြောင်းရင်းဖြစ်အဲဒီမှာမမျှော်လင့်ပါဘူး, သို့သော်, ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လျှင်အဖြေတစ်ခုရှာဖွေသေချာသင်ရလဒ်ကိုနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်စေဘယ်အရာကိုကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှပွုပါမညျ.
အပို Links များ
296 Gillespies လမ်း, Nabowla TAS 7260
© မူပိုင် Linii | ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူမှာ ငါ့အလုပ်
အခြားလူများယုံကြည်မှုနှင့်အတူမဝယ်နိုင်အောင်တုံ့ပြန်ချက်ထားခဲ့ပါ ကျေးဇူးပြု.. ထုတ်ပစ်